Department of Health and Human Services Victoria | Coronavirus (COVID-19) - नेपाली
परिवर्तित प्रतिबन्धहरूको सारांश
तपाईंले सम्झनु पर्ने कुराहरू
घरबाट बाहिर निस्कदा तपाईंले नाकमुख छोप्ने मास्क लगाउनै पर्छ
खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा टिष्युले वा कुहिनोले छोप्नुहोस् ।
कोरोनाभाइरस परीक्षण सबैका लागि नि:शुल्क हो । मेडिकेयर कार्ड नभएका बिदेशी आगन्तुकहरू, आप्रवासी कामदारहरू तथा शरणार्थीहरू सबैले नि:शुल्क परीक्षण गराउन सक्छन्।
भिक्टोरियाका वर्तमान प्रतिबन्धका चरणहरू
प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने र भिक्टोरियालाई COVID Normal (सामान्य) को स्थितिमा पुर्याउने योजना Coronavirus (COVID-19) पछि पुनः खोल्ने मानचित्र (रोडम्याप) मा उल्लेख गरिएको छ ।
Melbourne महानगर र क्षेत्रिय भिक्टोरियाको लागि छुट्टाछुट्टै योजनाहरू छन्।
परिस्थिति परिवर्तन भएमा प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Health Officer) ले प्रतिबन्धहरू परिवर्तन गर्न सक्छ ।
दोस्रो कदमः Melbourne महानगरमा २८ सेप्टम्बर २०२० देखि ।
२८ सेप्टम्बर २०२० बिहान ५ बजे देखि Melbourne महानगरमा कर्फ्यू हटाइएको छ ।
तपाईं ४ कारणहरूका लागि मात्र घरबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ ।
आफूलाई आवश्यक खाना र उपभोग्य बस्तुहरूको किनमेल गर्न
व्यायाम गर्न (आउटडोर तथा सिमित)
अनुमति प्राप्त काम गर्न
हेरचाह गर्न जान, सहानुभूति दिन जान वा चिकित्सा उपचार गराउन
दुई घरपरिवारका ५ जना ब्यक्तिहरू सम्म घर बाहिर (आउटडोर) भेट्न सक्नु हुन्छ।
क्रमिक रूपमा प्रेप देखि ग्रेड ६, VCE / VCAL तथा विशेष विद्यालयका विद्यार्थीहरू चौथो सत्रका लागि विद्यालयमा फर्किनेछन् ।
बालहेरचाह (चाइल्डकेयर) पुनः खुल्ला हुनेछ ।
धेरै कार्यस्थलहरू खुल्ला हुनेछन् ।
बाहिरी पौडी पुलहरू खुल्नेछन् र प्रति प्रशिक्षक दुई जना सम्म हुने गरि ब्यक्तिगत प्रशिक्षण गर्न पाउनेछन्।
बाहिरी धार्मिक भेलामा बढीमा ५ जना ब्यक्ति तथा एक आध्यात्मिक गुरू (जस्तै पुजारी) सम्म भेला हुन पाईनेछ ।
बाहिरी (आउटडोर) विवाह समारोहहरूमा बढीमा ५ जना सम्म (विवाह गर्ने दम्पति तथा दुई जना साक्षी सहित) सहभागी हुन पाउने छन् ।
यदि तपाई बिना कानूनसम्मत कारण क्षेत्रीय भिक्टोरियामा जानु हुन्छ भने तपाईलाई भिक्टोरिया पुलिसले $4,957 रकम जरिवाना गर्न सक्छ। यदि तपाईले आफुसँग नबस्ने पाँच जना भन्दा बढी साथी एवं परिवारलाई समूहमा बाहिर भेट्नु हुन्छ भने पनि जरिवाना लाग्न सक्छ । यदि तपाईको साथी वा परिवारले बिना मान्य कारण (जस्तै स्याहर गर्न) तपाईलाई घरमा भेट्न आएमा तपाईलाई जरिवाना लाग्न सक्छ ।
तेस्रो कदमः यदि राज्यभर यस मिति सम्मको १४ दिनको अवधिमा औसत दैनिक नयाँ संक्रमणको संख्या ५ सम्म रहेमा (राज्यभर), र यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सहमत भएमा ।
कर्फ्यू, घरबाट बाहिर निस्कने वा टाढा जान सक्ने दूरीको प्रतिबन्धहरू हटाइनेछ।
१० जना सम्म घर बाहिर (आउटडोर) भेला हुन सक्नुहुन्छ ।
अर्को घरपरिवारका ५ जना आगन्तुकहरू सम्म आफ्नो घरमा निम्त्याउन सक्नु हुन्छ। उहाँहरू एउटै घरपरिवारको हुनु पर्दछ।
ग्रेड ७ देखि कक्षा १० का विद्यार्थीहरू विद्यालयमा फर्किनेछन्, यदि नयाँ संक्रमणको संख्या न्यून भएमा र यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सहमत भएमा ।
पसलहरू तथा हेयरड्रेसर (कपाल काट्ने पसल) पुनः खुल्ला हुनेछन् ।
बाहिर बसेर खाने सुविधा (outdoor seated service) भएका रेष्टुरेन्ट र क्याफेहरू पुनः खुल्नेछन् र एक समूहमा १० जना ब्यक्तिहरू सम्मको सिमा रहनेछ ।
वयस्कहरूको बाहिरी (आउटडोर) सम्पर्क-रहित खेलकूद क्रमिक रूपमा सुचारू हुनेछ। १८ बर्ष मुनिका ब्यक्तिहरूको बाहिरी (आउटडोर) खेलकूदहरू (सम्पर्क सहित वा सम्पर्क –रहित) पुनः शुरू हुनेछन् ।
अन्तिम कदमः विशेषज्ञहरूको सुझाव बमोजिम, तथा यदि यस मिति सम्मको १४ दिनको अवधिमा कुनै नयाँ संक्रमण नदेखिएमा र यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको सहमत भएमा ।
५० जना सम्म घर बाहिर (आउटडोर) भेला हुन सक्नुहुन्छ ।
आफ्नो घरमा २० जना सम्म आगन्तुकहरू निम्त्याउन सक्नुहुन्छ ।
सबै पसलहरू खुल्ला हुनेछन् ।
रेष्टुरेन्ट र क्याफेहरूमा ५० जना ग्राहकहरूलाई भित्र बसेर खाने सेवा दिनेगरि तथा एक समूहमा २० जना ब्यक्तिहरू सम्मको सीमा राखेर सञ्चालन हुनेछ ।
सुरक्षा प्रावधान मिलेमा खेलकूदहरू सुचारू हुनेछ । सबै उमेरका सम्पर्क सहितका खेलकूदहरू पुनः शुरू हुनेछन् ।
विवाह तथा अन्त्येष्टिमा ५० जना व्यक्तिहरू सम्मा उपस्थित हुन सक्नेछन् ।
चार वर्ग मीटरको नियम पालना गर्ने सकेमा, सार्वजनिक धार्मिक पूजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
COVID Normal: यदि २८ दिन सम्म कुनै नयाँ संक्रमण नदेखिएमा वा राज्यभर कुनै सक्रिय संक्रमण बाँकी नरहेमा, तथा संक्रमणको चिन्ता नभएमा, तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको सहमत भएमा ।
यो बेला देखिः
सुरक्षा स्थिति हेरर प्रतिबन्धहरू खुकुलो गरिनेछ वा हटाईनेछ ।
घरमा बसेर काम गरिरहेका गरू क्रमिक रूपमा कार्यस्थलमा फर्कनेछन् ।
विवाह तथा अन्त्येष्टिमा कुनै सिमा रहने छैन ।
जमघट वा घरमा आउने आगन्तुकहरूमा कुनै सिमा रहने छैन ।
मिति १६ सेप्टम्बर २०२०, राती ११.५९ बजेबाट क्षेत्रिय भिक्टोरियामाः
घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने कारणहरू वा टाढा जान सक्ने दूरीको प्रतिबन्धहरू हटाइनेछ ।
१० जना सम्म घर बाहिर (आउटडोर) भेला हुन सक्नुहुनेछ ।
अर्को घरपरिवारका ५ जना आगन्तुकहरू सम्म मात्र आफ्नो घरमा भेट्न वा निम्त्याउन सक्नुहुन्छ । आगन्तुकहरू सबै एकै घरपरिवारमा सँगै बस्ने हुनु पर्दछ । यस प्रतिबन्धको अवधिमा तपाईलाई भेट्न आउने कुनै एक घरपरिवारलाई मात्रै तपाईले रोज्न सक्नु हुन्छ र परिवर्तन गर्न पाउदैन । १२ महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू पाँच जनाको सीमा संख्यामा गणना हुँदैन ।
वयस्कहरूको बाहिरी (आउटडोर) सम्पर्क-रहित खेलकूद क्रमिक रूपमा सुचारू हुनेछ । १८ बर्ष मुनिका ब्यक्तिहरूको बाहिरी (आउटडोर) खेलकूदहरू (सम्पर्क सहित वा सम्पर्क –रहित) पुनः शुरू हुनेछन्
अन्तिम कदमः विशेषज्ञहरूको सुझाव बमोजिम, तथा यदि यस मिति सम्मको १४ दिनको अवधिमा कुनै नयाँ संक्रमण नदेखिएमा (राज्यभर) र यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको सहमत भएमा ।
५० जना सम्म घर बाहिर (आउटडोर) भेट्न सक्नुहुन्छ
रेष्टुरेन्ट र क्याफेहरूमा ५० जना ग्राहकहरूलाई भित्र बसेर खाने सेवा दिनेगरि तथा एक समूहमा २० जना ब्यक्तिहरू सम्मको सीमा राखेर सञ्चालन हुनेछन्।
सुरक्षा प्रावधान मिलेमा खेलकूदहरू सुचारू हुनेछन्। सबै उमेरका सम्पर्क सहितका खेलकूदहरू पुनः शुरू हुनेछन् ।
COVID सामान्य (COVID Normal): यदि २८ दिन सम्म कुनै नयाँ संक्रमण नदेखिएमा वा राज्यभर कुनै सक्रिय संक्रमण बाँकी नरहेमा, तथा संक्रमणको चिन्ता नभएमा, तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको सहमत भएमा ।
सुरक्षा स्थिति हेरर बमोजिम प्रतिबन्धहरू खुकुलो गरिनेछ वा हटाईनेछ ।
घरमा बसेर काम गरिरहेकाहरू क्रमिक रूपमा कार्यस्थलमा फर्कनेछन् ।
कसरी सुरक्षित र स्वस्थ भएर बस्ने?
Coronavirus (COVID-19) अझै हाम्रो माझमा छ र तुरन्तै फैलन सक्छ । हाम्रो परिवार र समुदायलाई सुरक्षित राख्न हामी सबैले आ-आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
सुरक्षित भएर बस्न तपाईंले निम्न उल्लेखित केही सामान्य कुराहरू उपनाउन सक्नुहुन्छः
साबुन पानीले आफ्ना हातहरू कम्तीमा २० सेकेन्ड सम्म धुनुहोस् ।
घरबाट बाहिर निसक्नु पर्यो भने आफ्नो नाकमुख छोप्ने मास्क लगाउनुहोस् ।
आफ्नो मेडिकल परीक्षण गर्न जानुहोस् ।
यदि तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने घरमै बस्नुहोस् । परिवारलाई भेट्न वा काममा नजानुहोस् ।
तपाईंमा कुनै लक्षणहरू देखापरेमा परीक्षण गराउनुहोस् र सिधै घर फर्कनुहोस्।
सहयोग उपलब्ध छ
यदि तपाईंलाई वा तपाईंले चिनेको कोही व्यक्ति व्याकुल र चिन्तित हुनुहुन्छ भने सहयोग उपलब्ध छ - Lifeline लाई 13 11 14 मा वा Beyond Blue लाई 1800 512 348 मा फोन गर्नुहोस् । यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिएमा पहिला 131 450 नम्बरमा फोन गर्नुहोस् ।
मुख छोप्ने आवरण (मास्क)
१२ बर्ष तथा माथिका उमेरका सबै भिक्टोरियाबासीले घरबाट बाहिर निस्कदा मास्क वा मुख छोप्ने आवरण लगाएर जानु पर्छ। अपवादको रूपमा, यदि कानूनसम्मत कारण छ भने मात्र तपाईंले मास्क नलगाउन सक्नु हुन्छ । जस्तैः
दि तपाईंको कुनै चिकित्सकीय (मेडिकल) अवस्था छ, जस्तै तपाईंको अनुहारमा गम्भीर छालाको रोग छ, वा श्वासप्रश्वासको समस्या छ भने
दि तपाईं गाडीमा हुनुहुन्छ र तपाईं एक्लै वा तपाईंको घरको कुनै सदस्यसँग हुनुहुन्छ भने
दि तपाईं कठिन (जोड्दार व्यायाम गरिरहनु भएको छ भने, तैपनि तपाईंले एक मुख छोप्ने आवरण साथै बोक्नु पर्छ ।
मिति ११ अक्टोबर २०२०, राती ११.५९ बजे देखि तपाईले घरबाट निस्कन नाकमुख छोप्ने मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ । मुख ढाक्ने ‘फेस सिल्ड’ मात्र लगाएर पुग्दैन ।
परीक्षण तथा एकान्तबास (आइसोलेसन)
कृपया निम्न सामग्रीहरू तपाईंको समुदायमा ईमेल, सामाहिक मेडिया वा अन्य समुदायिक सञ्जाल मार्फत वितरण गर्नुहोस्।
परीक्षण तथा अलग बसाई (आइसोलेसन)
तपाईं कोरोनाभाइरस (कोभिड-19) भएको कसैको नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएमा के गर्ने - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (accessible)
तपाईं कोरोनाभाइरस (कोभिड-19) भएको कसैको नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएमा के गर्ने - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (PDF)
तपाईंको कोरोनाभाइरस (कोभिड-19) परिक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएमा के गर्ने - भाषा - What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) (accessible)
तपाईंको कोरोनाभाइरस (कोभिड-19) परिक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएमा के गर्ने - भाषा - What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) (PDF)
Coronavirus (COVID-19) परिक्षण - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (Word)
Coronavirus (COVID-19) परिक्षण - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (PDF)
सुरक्षित भएर बस्ने
परिवर्तितप्रर्तबन्धहरूकोसािाांश - Summary of changes to Stage4restrictions – coronavirus (COVID-19) – Nepali (PDF)
कोरोनाभाइरस (COVID-19) को जोखिम कम गन नहु ोस - Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (Word)
कोरोनाभाइरस (COVID-19) को जोखिम कम गन नहु ोस - Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (PDF)
खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा छोप्नुहोस् । - Poster - Cover your cough and sneeze
बारम्वार आफ्नो हात धुनुहोस् । - Poster - Wash your hands regularly
महामारीको समयमा बिदा लिँदा दिइने $1500 प्रकोप भुक्तानी - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (PDF)
महामारीको समयमा बिदा लिँदा दिइने $1500 प्रकोप भुक्तानी - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (Word)
आपतकालीन राहत प्याकेजहरू - Emergency relief packages fact sheet - (Word)
आपतकालीन राहत प्याकेजहरू - Emergency relief packages fact sheet - (PDF)
यदि तपाईं coronavirus (COVID-19) को दौरान असुरक्षित, तनाव वा चिन्तित महसुस गर्नुहुन्छ भने कसरी सहयोग माग्ने? - Emergency support fact sheet - (Word)
यदि तपाईं coronavirus (COVID-19) को दौरान असुरक्षित, तनाव वा चिन्तित महसुस गर्नुहुन्छ भने कसरी सहयोग माग्ने? - Emergency support fact sheet - (PDF)
नाक मुख छोप्ने आवरण
फेस मास्क लगाउने तरिका - How to wearaface mask (poster) (PDF)
फेस मास्क लगाउने तरिका - How to wearaface mask (poster) (Word)
कपडाको मास्क बनाउने तरिका - Design and preparation of cloth mask - Nepali (PDF)
कपडाको मास्क बनाउने तरिका - Design and preparation of cloth mask - Nepali (Word)